Home / ပွနျကွားရေး / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း(လျာထားချက်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဆွေးနွေးခြင်း
Ygn Editor June 12, 2019	ပွနျကွားရေး, သတငျး2Comments 139 Views
ရန်ကုန်၊ ဇွန်လ၊ ၁၂ ရက်၊ ၂၀၁၉
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် အရေးပေါ်အစည်းအဝေး (၁/၂၀၁၉) ဒုတိယနေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အရအသုံးခန့်မှန်းခြေ ငွေစာရင်း(လျာထားချက်) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဒဂုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျ၊လှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်ထွန်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ခိုင်မာဌေး၊ သာကေတမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သက်ထားနွယ်ဝင်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ၊ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးအေးမာ၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင်မင်း(ခ) ဦးဂေးမောင်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝေဖြိုးဟန်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ကြည်ပြာ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမိုးမြင့်၊သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးနေမျိုးကျော်(ခ) ဦးနေဘုန်းလတ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်း၊ ဒေါပုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဟန်စိုး၊ လသာမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်ဝင်းနိုင်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းနိုင်ဦး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ထွန်းနိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မိုးလွင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမန်းအောင်ကိုမင်း၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးမော်တို့မှ အသီးသီးဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
ရနျကုနျ၊ ဇှနျလ၊ ၁၂ ရကျ၊ ၂၀၁၉
ဒုတိယအကွိမျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော အရေးပျေါအစညျးအဝေး (၁/၂၀၁၉) ဒုတိယနတှေ့ငျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ်ဍာရေးနှဈ အရအသုံးခနျ့မှနျးခွေ ငှစောရငျး(လြာထားခကျြ) နှငျ့စပျလဉျြး၍ ဒဂုံမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောဇယြေ၊လှိုငျမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးကြျောကြျောထှနျး၊ လှိုငျမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါခိုငျမာဌေး၊ သာကတေမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါသကျထားနှယျဝငျး၊ လမျးမတျောမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) ၊ တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါအေးအေးမာ၊ ရှပွေညျသာမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးရနျအောငျမငျး(ခ) ဦးဂေးမောငျ၊ အငျးစိနျမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဝဖွေိုးဟနျ၊ ကြောကျတံတားမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဒျေါကွညျပွာ၊ တောငျဥက်ကလာပမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမိုးမွငျ့၊သင်ျဃနျးကြှနျးမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးနမြေိုးကြျော(ခ) ဦးနဘေုနျးလတျ၊ မရမျးကုနျးမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးရနျရှငျး၊ ဒေါပုံမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဟနျစိုး၊ လသာမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျော ကိုယျစားလှယျ ဦးဇျောဝငျးနိုငျ၊ ပနျးဘဲတနျးမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးသနျးနိုငျဦး၊ မင်ျဂလာတောငျညှနျ့မွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးလှဌေး၊ ဒဂုံမွို့သဈ(တောငျပိုငျး)မွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးညီညီ၊ ဒဂုံမွို့သဈ(မွောကျပိုငျး)မွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးတငျထှနျးနိုငျ၊ ကြောကျတနျးမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဇျောမိုးလှငျ၊ ကှမျးခွံကုနျးမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၁) တိုငျးဒသေကွီး လှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးမနျးအောငျကိုမငျး၊ ထနျးတပငျမွို့နယျ၊ မဲဆန်ဒနယျအမှတျ(၂) တိုငျးဒသေကွီးလှတျတျောကိုယျစားလှယျ ဦးဌေးမျောတို့မှ အသီးသီးဆှေးနှေးခဲ့ကွပါသညျ။
Previous ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀၊ ဘဏ်ဍာရေးနှဈ အရအသုံးခနျ့မှနျးခွေ ငှစောရငျး(လြာထားခကျြ) နှငျ့စပျလဉျြး၍ ပွညျသူ့ငှစောရငျးကျောမတီမှ ငှကွေေးဆိုငျရာ စိစဈတှရှေိ့ခကျြ၊ သုံးသပျအကွံပွုခကျြနှငျ့ သဘောထားမှတျခကျြ အစီရငျခံစာ
Next အရေးပေါ်အစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉) တတိယနေ့ အစီအစဉ် (လျာထားချက်)
Thanks, I’ve just been looking for info about this topic for ages and yours is the best I’ve came upon so far. However, what about the conclusion? Are you sure about the supply?